Among Pink Apk 2022 Download Ho an'ny Android | APKOLL
Tianao ve ny hilalao Impostor eo aminay? Raha eny, dia ho tianao ity kinova vaovao ity, izay fantatra amin'ny hoe Among Pink Apk. Io no kinova farany indrindra eto amintsika, izay manome ny lohahevitra fampisehoana tsara indrindra amin'ny mavokely. Manome loko vaovao sy manintona amin'ny endriny farany izy io.
Among Us dia lalao Multiplayer an-tserasera, izay azon'ny mpilalao tena milalao miaraka. Izy io dia lalao mifototra amin'ny fantasy, izay misy ny mpandoa vola rehetra amin'ny sambon-danitra. Saingy misy birch eo amin'ny sambo ary mpikambana iray na roa amin'ny mpiasa no voan'ny virus ary tapaka ny sambo.
Ankehitriny ny mpilalao rehetra dia ho eo amin'ny tokotanin-tsambo, izay ahitana ireo voan'ny aretina sy ireo mpiasa hafa. Noho izany, tsy maintsy manamboatra ny sambo ny mpiasan'ny sambo ary manala ireo olona voan'ny sambo. Ny mpikambana voan'ny aretina dia tsy maintsy mamoaka mpikambana hafa mangina satria raha fantatry ny mpiasa ny momba ilay mpisandoka, dia amin'ny alàlan'ny olona voan'ny aretina izy ireo.
Ka io voalaza etsy ambony io no lalao filalaovana izay ilainao hilalao ity lalao ity, fa eo ny lokony dia tsy manintona amin'ny kinova taloha ary koa zavatra voafetra ao amin'ny magazay. Noho izany, eto izahay miaraka amin'ny kinova farany, izay manolotra fiasa bebe kokoa. Noho izany, mijanona miaraka aminay ary zahao ilay Pink farany.
Topimaso an'ny Among Pink Apk
Izy io dia rindrambaiko filokana Android, izay manolotra sehatra filalaovana multiplayer ho an'ny mpampiasa rehetra. Lalao mampientam-po io, izay ahafahan'ny mpilalao manatsara ny haavon'ny IQ haingana sy haingana. Loharano misokatra izy io, izay midika fa afaka milalao mampiasa fitaovana Android ny olona rehetra.
Ny antony lehibe hanovana ny fampisehoana ho mavokely dia ny vondrona tovovavy mavokely mainty farany. Malaza amin'ny lalao samihafa izy io, izay ahitana PUBG ihany koa. Noho izany, misy ihany koa ny logo afovoany misy tovovavy efatra eo amboniny, izay karazana mahafatifaty sy manintona ihany koa ho an'ny mpilalao hankafy azy.
Mitovy amin'ny teny sasany amin'ny Blackpink, ny fizarana lalao maimaim-poana dia novaina ho In Your Area. Ny fampiratiana rehetra dia manolotra loko mavokely sy alokaloka maivana hafa. Ovaina ho an'ny mpampiasa ny fampiratiana, izay hananany traikefa mahagaga miaraka aminy.
Araka ny fantatrao dia ny teny anglisy ihany no manohana ny dikanteny tany am-boalohany, fa eo aminay ny mpampiasa Pink dia hahazo fiteny iraisam-pirenena valo mahery. Azonao atao ny manova ny fiteny mora foana ary mametraka azy araka ny zavatra niainanao.
The Lalao Mod mifandray amin'ny mavokely ihany koa ny interface, izay manolotra zavatra maro amin'ny loko samihafa. Betsaka ny fanovana natao tao anaty sambo. Saingy tsy maintsy mikaroka samirery izany rehetra izany ianao. Hizara ity app ity izahay. Noho izany, alaivo izany ary apetraho amin'ny fitaovanao.
Misy biby fiompy vaovao azo alaina ho anao koa, izay miara-dia aminao mandrakizay. Noho izany, alao ny biby fiompy mahagaga sy manintona farany ho an'ny toetranao. Misy ihany koa ny satroka, izay azonao ovaina mora foana. Ny iray amin'ireo zava-dehibe indrindra, izay tian'ny mpilalao rehetra atao dia ny mahazo ny loko mavokely haingana, rehefa miditra ny lalao.
Amin'izao fotoana izao, tsy misy Among Pink Mod hita eny an-tsena, fa raha vao misy izany. Ho entintsika tsy ho ela ny version mod. Noho izany, tsidiho hatrany ny tranokalanay ho an'ny fampiharana bebe kokoa. Mandra-pahatongan'izany dia tsy maintsy mankafy ity dikan-teny ity ianao.
Ka, endri-javatra mahavariana an-taonina maro no nampiana ao anatinay Apk Apk, izay azonao zahana ao. Noho izany, ampidino fotsiny ity rindrambaiko ity ary manomboka mizaha. Raha manana olana amin'ny fampiasana an'ity rindranasa ity ianao dia aza misalasala mifandray aminay amin'ny fizarana fanehoan-kevitra etsy ambany.
anarana Anisan'ny mavokely
Ataovy miavaka ny endri-tsoratra
Nohavaozina ny loko Spaceship
Misy biby fiompy vaovao
Ny hoditra sy ny satroka maimaim-poana
Vaovao sy manintona ny interface
Fampandehanana lalao mitovy amin'izany
Aminay Apk Impostor mandrakariva
Raha te-hisintona ny rakitra Apk amin'ity lalao ity ianao dia tsy misy izany amin'ny tranokala hafa. Saingy hizara rohy azo antoka sy miasa izahay. Noho izany, tsindrio fotsiny ny bokotra fampidinana, ny fisintomana dia hanomboka ho azy afaka segondra vitsy.
Raha vantany vao vita ny fizotry ny fisintomana dia mila manova ny toe-javatra ianao. Mba hanaovana izany, mandehana any amin'ny Settings ary sokafy ny tontonana Security, avy eo Checkmark amin'ny 'Source tsy fantatra'. Raha vantany vao vita ity dingana ity, afaka mandefa azy amin'ny fitaovana Android ianao.
Anisan'ny Pink Apk, ny sehatra filalaovana tsara indrindra, izay hampitombo ny traikefanao tsara amin'ny lalao. Noho izany, apetraho amin'ny fitaovana ity app ity ary manomboka milalao. Raha mila fampiharana misimisy kokoa, tsidiho hatrany ny tranokalanay.
Sokajy Games, Action Tags Eo amin'ny Pink Apk, Anisan'ny mavokely mavokely, Among Us Pink Apk, Lalao Mod Post Fikarohana
Lucky Spin Free Fire Apk [Mahazoa valisoa 2022]